Ku deeqo - BullyingCanada
Deeqsinnimadaadu waxay badbaadin doontaa nolosha.
Bixinta tabarucaad daryeel, waxaad siin doontaa carruurta la xoogsheegtay mustaqbal ifaya.
Faafida ayaa carruurta uga tagtay maskax ahaan kuwo jilicsan. Marka iyagana la caayo, inta badan waxaa lagu riixaa qarka. Taageeradaada fekerka leh, waxaanu hubin doonaa in adeegyadayada taageerada ay u joogaan iyaga wakhti kasta, maalin kasta, si bilaash ah, si loo joojiyo cagajuglaynta.
Riix halkan si aad u sameyso tabarucaad daryeel maanta!
Haddii aad rabto inaad daabacdo foomka deeqaha, buuxi oo u soo dir boostada BullyingCanada, soo deji Foomka Deeqaha halkan. Ciwaanka boostada waa 471 Smythe Street, PO Box 27009, Fredericton, New Brunswick, E3B 9M1.
sanadaha adeegga uu bixiyo BullyingCanada
Oohinta quusta ah ee caawimaadda ayaa la helay 2021
Waqtiyo badan oo oohin caawimo ah ayaa la helay oo la caawiyay 2021, marka la barbar dhigo cudurka ka hor 2019
Celceliska tirada daqiiqadaha ee uu dhallintu sugo ilaa uu la xidhiidhinayo jawaab-bixiye Taageero
malaayiin booqasho BullyingCanada.ca sanadka 2021
Tirada luqadaha BullyingCanada.ca ayaa lagu bixiyaa
Siyaabo kale oo taageero daryeel lagu muujiyo BullyingCanada
Noqo jawaab bixiye Taageero, ama ka caawi hawlaha maamulka. Waxaan ku qiimaynaynaa hadyada wakhtiga iyo xirfadahaaga!
Samee wax xiiso leh si aad lacag ugu ururiso BullyingCanada!
Amaahso shirkaddaada taageeradeeda, oo lagu aqoonsado inaad tahay muwaadin shirkadeed oo daryeel leh!
Hadiyadaha waaweyn iyo hadyadaha dammaanadda la mahadiyo ayaa caawiya BullyingCanada la soco baahida sii kordheysa ee gargaarkeena.
Mid hore ama mid cusub, ordaya ama aan ahayn, way fududahay baabuur aan loo baahnayn oo si kal iyo laab ah u taageera carruurta la xoogsheegtay!
Hadiyadaha lagu sameeyo doonistaada, caymiska iyo kaydinta hawlgabku waxay taageeri doonaan dhalinyarada la xoogsheegtay jiilasha soo socda!
Waad ku mahadsan tahay taageereyaasheenna ugu deeqsisan!
Booqo bogga kafaala-qaadayaasha si aad u ixtiraamto deeq-bixiyeyaashayada waaweyn!
Ma doonaysaa inaad ku tabarucdo wakhtigaaga?